बाठो हुन खोज्दा फसे माधब नेपाल, नेकपा एमाले समाजवादी पार्टी खारेज हुने खतरा ! – Dainik Sangalo
बाठो हुन खोज्दा फसे माधब नेपाल, नेकपा एमाले समाजवादी पार्टी खारेज हुने खतरा !
प्रकाशित मिति: बिहिबार, भाद्र ०३, २०७८ समय: १२:०६:४०
नेकपा एमालेबाट टुक्रिएर नयाँ दल दर्ताको निवेदन दिएका माधवकुमार नेपाल अध्यक्ष रहेको पार्टी दर्ता हुने संभावना न्यून रहेको छ । हिजो २ भदौमा नेपाल नेतृत्वको समूह निर्वाचन आयोग पुगेर नेकपा एमाले समाजवादी दर्ता गर्न निवेदन दिएका थिए । तर, आयोगमा नेकपा एमाले समाजवादी को निवेदन दर्ता भएको छैन ।
सरकारले जारी गरेको अध्यादेश अनुसार नयाँ दलले मान्यता पाउन राजनीतिक दल दर्तासम्बन्धी नियमावली संशोधन गर्न बाँकी छ । नियमावली संशोधन नगरी आयोगले दल दर्ता गर्न सक्दैन । आयोगले माधव नेपाल समूहले हिजो दिएको निवेदनका आधारमा दल दर्ता गर्न नसक्ने जनाइसकेकोे छ । किनभने दल दर्ताका लागि निवेदन दर्ता गर्न जुन कानुनी आधार चाहिने हो, त्यो कानून नै बनेको छैन ।
आयोगले राजनीतिक दल दर्ता सम्बन्धी नियमावली संशोधनको काम अघि बढाएको छ । अध्यादेश अनुसार नियमावलीको नियम ५ र अनुसुची ५ संशोधन गर्नुपर्ने हुन्छ । त्यसपछि मात्र अध्यादेशका आधारमा नयाँ दल दर्ताको निवेदन दिने बाटो खुल्छ । त्यसपछि पनि नेपाल पक्षलाई नयाँ दल दर्ता गर्न सहज छैन । किनभने राजनीतिक दल दर्ता सम्बन्धी ऐनको दफा ६ को ङ मा अर्को पार्टीसँग मिल्ने नाम राख्न नपाइने व्यवस्था छ ।
नेपाल समूहले नेकपा एमाले समाजवादी नाम प्रस्ताव गरेको छ । तर, नेकपा एमालेसँग मिल्नेगरी प्रस्ताव भएको दलको नाम स्वीकृत हुनसक्ने सम्भावना कम रहेको निर्वाचन कानूनका जानकारहरुको भनाइ छ । त्यस्तै सर्वोच्च अदालतले नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी नेकपा को नाममाथि २३ फागुनमा गरेको फैसलामा पनि मिल्दोजुल्दो नाम नराख्न आदेश दिएको छ ।
यही मुख्य दुई कारण नेपालले प्रस्ताव गरेको नेकपा एमाले समाजवादीनामको प्रस्तावित पार्टी दर्ता हुन कठिन छ । किनकी सर्वोच्चले आदेशमा बोल्दा, सुन्दा उस्तै लाग्ने, भ्रम पर्ने गरी पार्टी दर्ता नगर्न आयोगका नाममा आदेश दिएको छ । अनलाइन मार्गबाट
Last Updated on: August 19th, 2021 at 12:06 pm